Cabdikariim Xuseen Guuleed: Waxaan u taaganahay in aan mideeyo Soomaaliya . | Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Cabdikariim Xuseen Guuleed: Waxaan u taaganahay in aan mideeyo Soomaaliya .
Guddoomiyaha xisbiga Sahan C/kariin Xuseen Guuleed, oo waraysi gaara siinayay wargeyska laga leeyahay dalka Kenya ee Daily Nation ayaa sheegay in isbeddel hor leh oo ka hirgelin doono Soomaaliya haddii uu ku guulaysto hankiisa siyaasadeed ee ah madaxweynaha Soomaaliya.
Guuleed, ayaa sheegay in uu doonayo in la arko Soomaaliya mid ah oo horumarsan.
“Waxaan rabaa inaan mideeyo Soomaalida oo dhan, Waxaan hormarinayaa dhammaan qeybaha kala duwan ee Soomaaliya. Waa sida kaliya ee aan ku baabi’in karno saboolnimada, shaqo ugu abuuri karno dhallinteenna, ugana hor istaagi karno dambiyada iyo argagixisanimada”. Ayuu yiri Mr Guuleed.
C/Kariin ayaa sheegay in uu doonayo Soomaaliya oo nabad kula noolaata dalalka dariska iyo guud ahaan caalamka.
Guuleed, ayaa soo noqday wasiirka Arrimaha Gudaha iyo amniga ee Soomaaliya xilligii dowladdii Xasan Sheikh Maxamuud, kadibna waxa uu noqday madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug.
“Waxaan noloshayda inteeda badan ku noolaa Soomaaliya, waxaan bartay lana shaqeeyey hay’adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa dawliga ahba 30-kii sano ee la soo dhaafay, Waxaan ahay tartame cusub, waana la i tijaabin karaa, ka sokow waxaan ku dhex leeyahay xiriir wanaagsan dowladda iyo maamul goboleedyada. ” ayuu yiri Cabdikariim Guuleed.
4- su’aalood oo layska waydiinayo heshiishka maanta la dhex-dhigay labada aqal-baarlamaan iyo Villa Somalia.
Maxkamadda Ciidamada oo sii deysay Askar lagu Caddeyn waayey Dembi lagu soo oogay